Niknayman: နတ်သမီးနဲ့ မိစ္ဆာများ။ (The angel and the devil)
သူမက… ဒုက္ခ ဆင်းရဲမှ ကယ်တင်ရှင်၊
She is the light in the dark:
She is the rain in the desert:
She can help us from cloudy days,
But they can treat us in cruel ways.
She loves to hold peace,
When they love to kill and squeeze.
She doesn't try to make people love her,
While they automatically hated by us.
She wants to improve the country,
But they want to do for their families.
She's one in million for doing good,
They're one inamillion also to kill the good.
She is admired by people,
Whereas they are despised by people.
She is praised for nobility,
But they are named as brutality.
She scarifies everything for her country,
And yet, they destroy religion for the sake of authority.
She fights for freedom,
They fight for freedom fighters.
She is our idol,
Of course, they areagroup of devils.
We'll never give up hope,
As hope is the only thing we can hold.
သူတို့က… လူတွေကို သတ်ဖြတ် ဂုတ်သွေးစုပ်သူ။
သူမက… ကြိုးစားမှုမပါဘဲ လူတွေချစ်ခင်လာစေသူ၊
မျက်နှာမြင် မုန်းစေတဲ့ သူတို့။
တိုင်းပြည် တိုးတက်ဖို့သူမ အားထုတ်တယ်၊
မိသားစု ကောင်းစားဖို့ သူတို့ ဆက်လုပ်တယ်။
တစ်ခေတ်မှာ တစ်ယောက်ထွန်းတဲ့ ချစ်ခင်ဖွယ်သူမ၊
တစ်ခေတ်မှာ တစ်စု အာဏာအတွက် လူသတ်သူ။
လူတွေက သူမကို အရမ်းမြတ်နိုးကြတယ်၊
သူတို့ကတော့ ဆန့်ကျင်စွာ ရှုတ်ချခံနေပြီ။
သူမရဲ့ မြင့်မြတ်မှု အတွက် ချီးကျူးခံရသူ၊
သူတို့ကတော့ ရက်စက်မှု အပေါင်း သရဖူဆောင်းထားသူများပါ။
တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး အတွက် အရာရာ စွန့်လွတ်ခဲ့သူ၊
ဟုတ်တယ်…သူတို့ကတော့ ဘာသာတရားကို အာဏာတည်မြဲဖို့ ဖျက်ဆီးသူ။
လွတ်လပ်မှုအတွက် သူမ တိုက်ပွဲဝင်တယ်၊
သူတို့ကတော့ လွတ်လပ်မှုမြတ်နိုးသူတွေကို ပြန်ပြီးတိုက်တယ်။
သူမဟာ ကျွန်မတို့အားလုံးရဲ့ စံပြမိခင်၊
ကျွန်မတို့မျှော်လင့်ချက် ဘယ်တော့မှ မပျက်သုဉ်းဘူး။ ။
(ရေးသားခံစားသူ - CH)။
Posted by Niknayman at 6:03 PM